အမွှေးအကြိုင် Plum ကိတ်မုန့် လူတိုင်းအတွက်အသုံးဝင်သောသတင်းအချက်အလက်များ
ဒီ Plum ပိုင်ပျော့သောမုန့်စိမ်း, ပေးသောစပ်အရသာနှင့်အတူအရည်ရွှမ်းအဆာ သစ်ကြမ်းပိုး и ဂျင်း။ အမွှေးအကြိုင်နှင့်အရသာ pastries, ကတစ်ခုထပ်မယူရန်မဖြစ်နိုင်ပါ!
Plum Pie အတွက်ပါဝင်ပစ္စည်းများ - စာရွက်
အခွံ Plum - 350 ဂရမ်;
ကြံသကြား (အညိုရောင်) - 1 tbsp ။ ဌ;
အချစ် ရေနံ - 20 ဂရမ်။
မုန့်ညက် - 1 stack ကရှင်း;
ဖုတ်မှုန့် - 1 Tsp ။ (ဂျုံမှုန့်နှင့်အတူရှင်းရှင်းဖျက်ဆီးခြင်းငှါ);
ကြက်ဥ - 1 အပိုင်းပိုင်း;
နို့ - 1 /4stack;
အညိုရောင်သကြား -3tbsp ။ ဌ;
ပျားရည် - 50 ml ကို;
သစ်ကြမ်းပိုးတူ။ ဂျင်း - 1/2 Tsp ။
Plum ပိုင်အောင်လုပ်နည်းလမ်းညွှန် - စာရွက်
၁၈၀ ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်အထိအပူပေးရန်မီးဖိုကိုချက်ချင်းထွန်းလင်းပါ။ မှို၏အောက်ခြေကိုအချင်း ၁၂ × ၂၇ စင်တီမီတာဖြင့်အဖုံးဖြင့်ဖုံးအုပ်ထားပါ။ အနားများကိုမှို၏နှစ်ဖက်အပေါ်ဆွဲထားရန်စက္ကူကိုယူသင့်သည်။ ထိုအခါထောပတ်ကိုယူ။ , သင်၏လက်ချောင်းများနှင့်အတူပျော့, မှိုထဲမှာခေပျြအမဲဆီ။ 1 tbsp - ကြံသကြားနှင့်အတူအောက်ခြေဖြန်း။ ဌ
၂။ သကြားထိပ်ပေါ်တွင်ထားသည့်ပိုင်အတွက်ယိုစီးမှုအားထက်ဝက်လျှော့ချပါ။ ချပ်များကိုချပါ။
၃။ မုန့်စိမ်းအတွက်ဒိန်ချဉ်ကိုထောပတ်တစ်ဝက်ကိုအရည်ကျိုပါ။ အညိုရောင်သကြားနှင့်ပျားရည်ထည့်ပါ။ အသေးဆုံးမီးပေါ်မှာစဉ်ဆက်မပြတ်မွှေ, ကွတ်။ သကြားပျော်နေစဉ်။ ထိုအခါ burner မှဖယ်ရှားခြင်းနှင့်ချိုမြိန်ရည်အေး (3 မိနစ်) ။
၄။ ထို့နောက်ပိုင်ရှင်၏စာရွက်အရနို့ရည်ရည်ထဲသို့နို့ရည်ထည့်ကာကြက်ဥတစ်လုံးကိုရိုက်ပါ။ သုတ်လိမ်းပြီးသောမုန့်ညက်ကိုထည့်ပါ။
၅။ ဒြပ်ထုကိုလှံတံဖြင့်တစ်သားတည်းရှိသောအစုလိုက်သို့ယူဆောင်။ Plum သို့လွှဲပြောင်းပါ။ ပြီးသားအပူမီးဖို၌ 5-40 မိနစ်ခန့်ထားပါ။
6. အရက်သောက်ပြီးနောက်မုန့်စိမ်းမှထွက်သင့်သောပွဲစဉ် (ပတ္တာ) နှင့်အတူကိတ်မုန့်ရဲ့ဖုတ်စစ်ဆေးပါ။
၇။ မီးဖိုပေါ်မှဟင်းခတ်အမွှေးအကြိုင်များနှင့်ပြင်ဆင်ထားသည့် Plum ပိုင်ကိုဖယ်ရှားပြီး ၁၀ မိနစ်အကြာတွင်ဝါယာကြိုးစင်ပေါ်တွင်ထားပါ။ ပြီးလျှင် - ပန်းကန်ထဲကိုထည့်ပါ။ အပိုင်းပိုင်းခုတ်ဖြတ် လက်ဖက်ရည်ပူနှင့်အတူအမှုတော်ကိုထမ်းရွက်။
လူမှုရေးကွန်ရက်များ၌ Plum Pie စာရွက်ကိုသင်၏မိတ်ဆွေများနှင့်မျှဝေပါ။ သင့်အတွက်ခက်ခဲသည်မဟုတ်ပါ၊ သင်၏မိတ်ဆွေများသည်ကျေနပ်ကြသည်။
63 အဆိုပါဒေတာဘေ့စဖို့ query လုပ်တဲ့အခါ, 0,246 စက္ကန့်ကျော် Generate ။